Momba anay - Hebei Evidence-based Medical Technology Co., Ltd.
Ny fahasalamana ao anaty masinina iray xz2010-106, mpanadihady meridian dia nametraka ny rafi-pitiliana amin'ny ankapobeny, wfk Diagnostia feno momba ny rafitra fitsaboana nentim-paharazana sinoa, rafitra fanombanana ny risika momba ny fahasalamana 12 fanadinana ara-batana mahazatra, fitantanana fanombanana ny risika ara-pahasalamana ireo mpiasa voatahiry arisiva elektronika ary fanaovana maodely lehibe.
Xz2010-106, metatra glucose ao anaty rà siramamy:
Alohan'ny sy aorian'ny fisakafoanana, ny glucose amin'ny ra, ny tosidra ary ny fitsapana oksizenina amin'ny Rà. Fomba fanehoan-kevitra amin'ny fotoana tena izy, fandaharana momba ny sakafo ara-pahasalamana no namoaka fandaharan'asa mahasalama.
Fahasalamana ao anaty masinina iray xz2010-106, famantaranandro maranitra Smart kidoro, Xikang Xinxibao: (torimaso, trano) Fandinihana ara-batana mahazatra, fanaraha-maso ny marary amin'ny fotoana tena famantarana famantarana, famerenana data, - antso vonjy maika SOS.
X8 famantaranandro marani-tsaina marani-tsaina, electrocardiograpia fampiasa Xikang xinxinbao: (mivoaka) Fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy ireo famantarana lehibe, fisorohana aretina mitaiza; Fiverenana ny angon-drakitra tena izy, fanaraha-maso ny fotoana tena izy. Fiantsoana vonjy maika SOS iray mikasika, dokotera, mpikambana ao amin'ny fianakaviana Fanaraha-maso an-tserasera sy fametrahana toerana.
Wfk TCM rafi-pitiliana feno, rafitra fanombanana ny risika momba ny fahasalaman'ny HRE, sehatra rahona AI Manelanelana amin'ny Internet amin'ny fotoana tena izy, fanavaozana ny arisiva elektronika ary fampisehoana angona lehibe Famantarana zava-dehibe, fitarihana fanafody ary famakafakana fanoherana zava-mahadomelina. .
Mitadiava torohevitra ara-pitsaboana
Fantsona manan-tsaina, fantsom-pifandraisana maitso: Hopitaly Xuanwu, Hopitaly Medical Union College, fiaraha-miasa ara-pitantanana amin'ny famaritana sy fitsaboana. (fanombanana, fanaraha-maso, fitsaboana amin'ny fidirana an-tsehatra fitantanana fahasalamana) loharanom-pahalalana hopitaly telo voalohany ao Shina Fitsaboana any ivelany, sns.